कोरोना संक्रमित संख्यामा भारत १० औं स्थानमा, मृत्यू संख्या ४ हजार माथी, संक्रमित १ लाख ३८ हजार नाघ्यो - ePosttimes
Homeअन्तर्राष्ट्रियकोरोना संक्रमित संख्यामा भारत १० औं स्थानमा, मृत्यू संख्या ४ हजार माथी, संक्रमित १ लाख ३८ हजार नाघ्यो
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०४:४३ अन्तर्राष्ट्रिय, कोरोना, समाचार 0
दिल्ली एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का संक्रमित संख्याको आधारमा अहिले भारत विश्वको १० औं बढी प्रभावित मुलुक बनेको छ ।
कोभिड-१९ को विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका भारतीय शोधकर्ताका अनुसार जुलाइसम्ममा भारतमा केही लाख संक्रमित थपिन सक्छन् । अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ३८ हजार नाघिसकेको छ ।
संक्रमित संख्याको हिसाबमा सबैभन्दा अगाडि अमेरिका छ । त्यसपछि ब्राजिल, रुस, बेलायत, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र टर्कीपछि भारतको नाम छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा चार हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
भारतको सरकारी तथ्यांकअनुसार जनसंख्याको आधारमा दोस्रो ठूलो मुलुक भारतमा अहिले हरेक १३ दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दोब्बर भइरहेको छ । यसै अवस्थामा सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन शुरु गरेको छ ।
यसअघि एम्सका निर्देशक रणदीप गुलेरियाले पनि केही दिनअघि अहिले निरन्तर भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको बताउँदै कुनै न कुनै अवस्थामा त यो उत्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । तर, सबैभन्दा उच्च विन्दुमा कहिले पुग्छ भन्ने कुरा भने मोडलिङ डाटामा आधारित हुने उनको भनाइ छ ।
धेरैजसोले भने जुन–जुलाईमा भारतमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या उच्च विन्दुमा पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
डाटा मोडलिङले के भन्छ ?
समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यस विषयमा युनिभर्सिटी अफ मिसिगनका बायोस्ट्याटिस्टिक्स र महामारी विशेषज्ञ प्राध्यापक भ्रमर मुखर्जीसँग कुरा गरेको थियो ।
मुखर्जीका अनुसार अझै भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुन सकेको छैन । उनको टोलीले गरेको अनुमान अनुसार जुलाईको शुरुवातमा भारतमा संक्रमितको संख्या ६ लाख ३० हजार देखि २१ लाखसम्म पुग्न सक्छ । भारतमा कुल संक्रमितको पाँभ भागको एक भाग मुम्बई सहरमा देखिएको छ ।
भारत सरकारको भनाइ
कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण अहिले भारतको सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको चार राज्यको सरकारी अस्पतालमा बेडको अभाव देखिएको छ । केही राज्यमा संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नलिएका कारण परिवारले विभिन्न स्थानमा भौंतारिनुपरेको समाचार पनि आएको छ ।
रोयटर्सका अनुसार भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणमा वृद्धिको अहिले गरिएको यो अनुमान अनुसार संक्रमित बढे उनीहरुको कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
प्रेस ब्रिफिङको क्रममा सरकारले सबै संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नु जरुरी नरहेको बताएको छ । साथै अस्पतालमा बेडको संख्या बढाउनको लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले आइसोलेसनको लागि नियम पनि बनाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले भारतका अस्पतालमा सात लाख १४ हजार बेड छन् । सन् २००९ मा नै भारतमा पाँच लाख ४० हजार बेड थिए ।
भारतमा लकडाउन घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयको सबैले स्वागत गरेका थिए । त्यतिबेला लकडाउनले भारतलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न पर्याप्त समय मिल्ने विशेषज्ञहरुले बताएका थिए । तर, अहिले बढेको संक्रमितको संख्याले भने भारतको तयारीमा अझै पनि कमी देखिएको छ ।
मुखर्जीका अनुसार लकडाउनले मात्रै सबैकुरा हासिल हुन सक्दैन । यस्तोमा लकडाउनको साथै अन्य कामहरु पनि एकसाथ अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ । यद्यपि लामो समयसम्म लकडाउन गर्नाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पार्छ ।
भारतले लकडाउनको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य राहतको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । यसले मुलुकमा व्यापार र उद्योगलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा राहत पुग्नेछ । यसबाट मुलुकको नगद प्रवाहको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
399200cookie-checkकोरोना संक्रमित संख्यामा भारत १० औं स्थानमा, मृत्यू संख्या ४ हजार माथी, संक्रमित १ लाख ३८ हजार नाघ्योyes
नयाँ दिल्लीमा २०० जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोविड १९ संक्रमण अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १० लाखभन्दा बढी पुग्यो कोरोनाविरुद्ध चिनियाँ खोप टर्की र इन्डोनेसियामा परिक्षण प्रारम्भ, ब्राजिलमा पनि प्रयोग गर्ने निर्णय भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा २७५ को मृत्यु भारतमा दुई हप्ता लम्बियो लकडाउन, केही खुकुलो पारिने संक्रमित बढे संगै भोजपुरमा एक हप्ता लकडाउन, संक्रमितको सख्या २० पुग्यो हावाबाट पनि सर्न सक्छ कोरोना ! तीन हजार ३ सय ९९ परीक्षणमा २ सय ५९ मा सङ्क्रमणको पुष्टि, ५ सय १३ जना निको भएर घर फर्के